रोचक – Online Nepal
एजेन्सी । संसारमा अनेकथरी मानिस हुन्छन् । उनीहरुका अनौठा शौखले कहिले भने अप्ठेरोमा पार्छ । त्यस्तै एक ब्यक्तिको अनौठो बानीले अप्ठेरोमा पारेको छ । उनको त्योब बानीले हेर्नेहरुलाई त रमाइलो लाग्यो तर प्रहरी खोरमा जानु परेको छ ।।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,, दक्षिण भियतनाममा बस्ने एक ब्यक्तिको अनौठो बानीले प्रहरी खोरमा जानु परेको छ । त्यहाँका एक व्यक्ति बाइक चलाउँदै बीच सडकमै नुहाउन थालेको दृष्य अरुका लागि रमाइलो थियो । आफुले बाइक चलाउने र साथीलाई पछाडीवाट पानी हाल्न लगाएका थिए । आफ्नो साथीसँग बाइकमा बसेर बिच सडकमै नुहाउँन थालेका ति ब्यक्ति अहिले प्रहरी खोरमा पुगेका छन् । सोसल मिडियामा यो भिडियो जब भाइरल हुन थाले पछि प्रहरीले थाहा पायो । भिडियो भाइरल भएपछि बाइकमा बसेर बिच सडकमा नुहाउँन खोजेका ति व्यक्तिलाई खोजर प्रहरीले कार्बाही गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यामका अनुसार ति
काठमाडौँ । हरेक आमाको चाहना हुन्छ, आफ्नो सन्तान स्वस्थ र भाग्यमानी बनोस्। उसको जीवनमा कुनै पनि दुख पीडा नआउन।ज्योतिषाचार्य प्रफुल्ल भट्टले गर्भवती महिलाले आफ्नो सन्तानका स्वास्थ र भाग्यमानी बनाउन १ खास मन्त्रका बारेमा उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार प्रत्येक विहान गर्भवती महिलाले उक्त मन्त्र जप्दा पेटको सन्तानमा सकारात्मक असर पर्ने र शिशु स्वस्थ र सुन्दर रहने उल्लेख गरेका छन्। भर्गवती महिलाले जुन बेला पनि उक्त मन्त्र जप सुरु गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,, यस्तो छ मन्त्र रक्ष रक्ष गणध्यक्षः रक्ष त्रैलोक्य नायकः।भक्त नाभयं कर्ता त्राताभव भवार्णवात् ।। मन्त्र जप गर्ने नियम १) यो मन्त्र जप गर्दा भगवान गणेशको प्रतिमा वा तस्वीर अगाडि राखेर गर्नु पर्दछ।२) मन्त्र जप गरेपछि भगवान श्रीगणेशलाई मन पर्ने मोतीचूरको लड्डु समेत चढाउनु पर्दछ।३) त्यसपछि महिला
काठमाडौँ । बाँकी छालाको तुलनामा कुइना र घुँडाको छाला बढी कडा हुन्छ, त्यसैले पनि बढी कालो हुन्छ । घुँडा र कुइनाको कालोपनलाई साबुनले घोटेर हटाउने प्रयास गर्नुभयो भने केही फरकपनको महसुस हुँदैन । यी भागको कालोपनालाई हटाउन यस्ता सजिला टिप्स अपनाउनुहोस् । बेकिङ सोडा – एक चम्चा बेकिङ सोडालाई दुधमा मिसाउँने र पेस्ट बनाएर लगाउँने । दिनमा दुई, तीन पटक घुडा वा कुइनामा लगाउँनुहोस् फरक देख्नुहुन्छ । बेसार, मह र दुध – बेसार, दुध र महलाई मिसाएर पेस्ट तयार गर्ने । त्यसलाई कुइना र घुडामा लगाएर कम्तिमा २० मिनेट राख्नुहोस् र भिजेको हातले समाज गर्दै पानीले धुनु होस् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,, चिनी र जैतुनको तेल – चिनी र जैतुनको तेललाई मिसाएर गाढा पेस्ट बनाउँनुहोस् । घुडा र कुइनामा ५ मिनेटसम्म राम्ररी मसाज गर्नुहोस् । केही समयपछि साबुन लगाएर पानीले धुनुहोस् ।कागती र मह – एक चम्चा कागतीको
काठमाडौँ। तरकारीको स्वाद बढाउनको लागि मात्रै होइन औषधिको रूपमा पनि लसुनलाई वर्षौँ देखी प्रयोग गरिन्छ । आयुर्वेदिक चिकित्सकका अनुसार लसुनको प्रकृति गर्मी र सुख्खा हुन्छ । धेरै औषधीय गुणहरू हुने लसुन खाएमा हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ । तर केही यस्ता स्वास्थ्य समस्या भएका मानिसहरूलाई लसुन खाएमा झन् बढी हुन सक्छ । त्यसैले थाहा पाइराखौँ कस्तो अवस्थामा लसुन खाएमा त्यसले मानिसहरूलाई नोक्सान पनि गर्न सक्छः १. कलेजोको समस्या छ भनेः पहिले देखी कलेजोको समस्या छ भने लसुन नखानुहोस । धेरै लसुन खानाले झनै समस्या बढ्न सक्छ । २. होमियोप्याथिक ओषधि प्रयोग गरिरहनुभएको छ भनेः होमियोप्याथिकको औषधि प्रयोग गरिरहनुभएको छ भने लसुन खानु हुदैँन । यस्तो अवस्थामा लसुन खाएमा औषधिले काम गर्दैन् । ३.निम्न रक्तचापको समस्या छ भनेः धेरै लसुुन खानाले ब्लड प्रेशर कम हुन्छ । पहिले देखि नै लो ब्लडप्रेशरको समस्या छ भने लसु
काठमाडौ। मानिसका हातमा कयौं प्रकारका रेखा र चिन्ह हुन्छन्। जसलाई हस्तरेखा ज्योतिषविद्याको माध्यमबाट हेरेर उसको भविष्यवाणी गरिन्छ। मानिसको हातमा शुभ र अशुभ दुवै चिन्ह हुन्छन्। तर त्यही चिन्हमध्ये एउटा चिन्ह यस्तो पनि हुन्छ जुन हजार व्यक्तिमध्ये एकजनाको हातमा मात्रै हुन्छ। यजसको हातमा यस्तो चिन्ह हुन्छ त्यसका व्यक्तिलाई भगवान शिवको सधैं कृपा भइरहन्छ। त्यो चिन्ह भनेको त्रिशुल हो।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ** आज हामी तपाइँलाई हातको कुन भागमा त्रिशुल भएको व्यक्ति भाग्यमानी हुन्छ भनेर जानकारी दिँदैछौं। हातमा यदि गुरु पर्वत नजिक त्रिशुलको चिन्ह छ भने त्यस्ता व्यक्ति आफ्नो जीवनमा धेरै सफल हुन्छन्। र उसले आफ्नो क्षेत्रमा प्रसिद्धि प्राप्त गर्छ। यो चिन्ह चेरी औँला र गुरु पर्वतमा बनेको हुन्छ। यदि त्रिशुलका चिन्ह बुध पर्वतमा छ भने त्यस्तो व्यक्ति धेरै भाग्यमानी हुन्छ। र निकै तिक्ष्ण
काठमाडौँ । मानिस आफ्नो अनुहार सकेसम्म गोरो बनाउन प्रयासरत हुन्छन्। बजारमा पाइने विभिन्न प्रकारका गोरो बनाउने क्रिमहरुको प्रयोगले छालामा नराम्रो असर पर्नसक्छ। अनुहारमा चमक पाउनको लागि हामी महँगा क्रिमहरुको प्रयोग गर्ने गर्दछौं। तर हामी आफैँले थोरै दिमाग लगाउने हो भने घरेलु उपायहरु अपनाएर पनि अनुहार गोरो बनाउन सकिन्छ। अनुहार तथा छाला गोरो बनाउन निम्न १० घरेलु उपायहरु अपनाउन सकिन्छ। १) बेकिंग सोडाः बेकिंग सोडा र पानीलाई मिलाएर पेस्ट बनाउनुहोस्। त्यसपछि आफ्नो अनुहार फेस वाशले धुुनुहोस्। अनि अनुहारमा तयार गरिएको पेस्टलाई लगाउनुहोस्। र १५ मिनेटपछि मुख धुनुहोस्। २) दूध र केराः पाकेको केरालाई दूधसँग मिसाएर पेस्ट बनाउनुहोस्। अनि अनुहारमा लगाई २० मिनेटपछि सफा पानीले मुख धुनुहोस्। ३) गुलाब जलः गुलाब जललाई दूधसँग मिसाएर सधैं राति सुत्नुभन्दा अगाडि अनुहारमा लगाउनुहोस्। यसले तपाईंको छालाम
काठमाडौं । चर्चित टलिउड अभिनेत्री हन्सिका मोटवानी आफ्नो बो ,ल्ड लुकका कारण चर्चामा आएकी छिन् । अक्सर इन्टरनेटमा हन्सिकाका तस्विर भा’इरल हुन्छन् । हन्सिकाको भिडियो इन्टरनेटमा तीव्र रूपमा भाइरल भइरहेको छ । यो भिडियोमा उनी गाउनमा देखिएकी छन् । नीलो रङको गाउनमा हन्सिका आर्कषक देखिएकी छन् ।हन्सिका सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छिन् । उनी आफ्नै इन्स्टाग्राममा फोटो र भिडियो सेयर गरिरहन्छिन् । उनले साउथ सिनेमाका धेरै सुपरहिट फिल्ममा काम गरेकी छन् । बाल कलाकारका रूपमा उद्योगमा आएकी उनले टीभी सिरियलमा पनि काम गरेकी छन् । उनी हिन्दी फिल्म कोई मिल गयामा पनि देखिएकी थिइन् । हेरौ उनको केहि तस्विरहरु:
सामाजीक बिकृती हटाउने सोच लिएर हिडेको छु ,पक्कै पनि पढेर साथ दिनु हुनेछ जतिसक्दो सेयर पनि गरिदिनु होला ,आमा म अहिले बिहे गर्दिन , छ‍ोरीले भनिन ,आमा : यत्तिको घर पाउदा नि के भएको त?छोरी :: पढ्छु के आमा !आमा : उनिहरुले पढाइदिन्छन, तैले बिहे गर्नै पर्छ । छोरीले अब कर गरिनान उनले बिहे गर्न राजी भइन् ।बिहेमा भएको केही समय राम्रो थियो त्यसपछि उनले आफू पढ्ने कुरा आफ्नो श्रीमान लाई भनिन् । श्रीमान : किन पढ्नु पर्यो ?श्रीमती : पढ्ने मेरो रहर हो, म जसरी नि पढ्छु ।श्रीमान : बुहारी भएर ठुलो कुरा गरेको सुहाउदैन। खुरुखुरु घरको काम गर्न !श्रीमतीले आफुले पढ्ने चाहाना मनमा नै दवाएर राखिन् । सासू ,ससुरा, नन्द कोही पनि बोलेन । उनलाई सबैले एक्लो बनाउन थाले । आफ्नो श्रीमान दिनदिनै झगडा गर्न थाले, रिसाउन थाले, उनलाई माया नै गरेनन। आफ्नो माइतीमा आमा बाबालाई भनौ भने पिर मान्ने हुन कि भनेर आफ्नो पीडा मनम
इंगल्याण्ड नजिकैको नर्थम्बर’ल्याण्डमा एक महि’ला केही दिन यता सुत्नै नसकेको दाबी गरिरहेकी छिन् । आफ्नो छोराको पछाडि भूत’जस्तै देखिने अपरिचित बालक’को अनुहार र छोराको काँध’मा उनको हात देखेदेखि उनी डराए’की छिन् । लाउराले गत सोमबार नर्थम्बरल्याण्ड’स्थित प्लेसी वुड्स कन्ट्री पार्कमा परिवारसँग पिकनिक गएका बेला खिचेका थुप्रै तस्बिरमध्ये एउटा तस्बिर भिन्न भेटियो ।१५ वर्षीया लाउरा’की छोरी चा र्लोट र १६ वर्षे ज्याक ठूलो रुखमा चढे भने ९ वर्षीय उनका छोरा बाइरिन वाट्सन रुखमुनी अडेस लगाएर फोटो खिचाए ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,, मेडिकल रिसेप्सनिष्ट लाउरा’ले ती फोटो घर आएर हेर्दा बाहिरिनको पछाडि अर्को बालकको फोटो देखेपछि उनी तर्सि’एकी हुन् । त्यहाँ उनीहरुबाहेक अन्य कोही व्यक्ति नभ’एको उनको दाबी छ । भूतबारे पहिले विश्वास नगर्ने उनलाई उक्त फोटोले भूत’प्रति विश्वास जगाए’को उनले बताएकी छिन् ।
थाइल्याण्डका २० वर्षका माछा मार्ने काम गर्ने युवक कामबाट फर्किने क्रममा बालुवामा भेटेको डल्लोका कारण करोडपति बन्ने भएका छन् । उनले जनवरी ६ का दिन माछा मारेर फर्किने क्रममा बालुवामा मैनजस्तो डल्लो भेटेका थिए । यो डल्लो ह्वेलको बान्ता हुन सक्ने र यसको मूल्य २ लाख १० हजार पाउण्ड (३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ) बराबर पर्ने डेलीमेलको रिपोर्टमा उल्लेख छ । चालेरम्चाइ महापनले जनवरी ६ का दिन दक्षिणी सोङख्ला प्रान्तको समिला बीचमा आफ्नो माछा मार्ने डुंगालाई किनारामा बाँधेर फर्किने क्रममा यो ७ किलोको डल्लो भेटेका थिए । उनका अनुसार त्यस दिन उनी मोलेट माछा मार्न भनेर गएका थिए तर अचानक मौसम खराब भएपछि उनी चाँडै किनारामा आउनु परेको थियो । उनले डुंगा थन्क्याएर फर्किने क्रममा किनारामा सेतो डल्लो देखे जसलाई पानीको छालले किनारतर्फ धकेलिरहेको थियो ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,